Uma ungaba nezincwadi eziyi-10 kuphela? | Izincwadi Zamanje
Uma ungaba nezincwadi eziyi-10 kuphela? Ngenhlanhla lokhu ngeke kwenzeke, kepha kuthiwani uma kwenzeka? Kungaba yini izihloko eziyi-10 ongakhetha ukuzifunda uphinde uzifunde kaninginingi kuyo yonke impilo yakho?
Imvamisa sibona izindatshana ezivela ku- uhlu lwezincwadi ukufunda: "Okubalulekile ehlobo", "Izincwadi eziyi-101 okufanele uzifunde ngaphambi kokuba ufe", "Izincwadi zezinkondlo ezihamba phambili", "Amanoveli ayi-10 amafantasy, alungele ukunika intsha", njalonjalo. amathuba angapheli . Uma bekufanele uzenzele olwakho uhlu, yikuphi okuzoba kulo? Ngingathanda ukwazi.
Okwamanje, ngishiya uhlu olwenziwe ngezifiso kakhulu lwe- izincwadi eziyishumi Kunconywa kakhulu. Yize lokhu kuyindatshana yomuntu uqobo, ngikholwa ukuthi kulezi zinhlu lapho zikunikeza isihloko futhi ngasikhathi sinye zichaze ngamagama ambalwa ukuthi kungani kufanele usifunde, ungathola imibono emihle. Kwazi bani? Mhlawumbe incwadi yakho oyithandayo yangakusasa ikhona ohlwini lwami.
"Imilolotelo Nezinganekwane" de UGustavo Adolfo Becquer: Uma umbono wokuthi wazalwa ngesikhathi esingalungile wake wawela emqondweni wakho, uma uthanda ukuthanda ezothando futhi ungowothando noma othandana naye, uma ubheka ukuthi incwadi enhle kufanele ibe nezinkondlo nezindaba ezimfushane, noma uma Ngokuphambene nalokho , IBécquer ikuluhlu lwakho lwezimbongi ozithandayo, akufanele uyeke ukufunda le ncwadi. Endlini yokushicilela yeqoqo lase-Austral, iqoqo lokuqala lephakethe elikhuluma iSpanishi, ungalithola cishe ngama-euro angama-8. Amakhasi angaba ngu-380 agcwele imfihlakalo, ezothando ngohlobo olumsulwa nesingeniso esibanzi ngomlobi waso nesikhathi sakhe.
"Siddhartha" de Hermann Hesse: Uma uthanda ukuzindla, uma uzibheka ungumuntu othanda ukuhlonishwa ngabantu, uma ukholelwa ngokuqinile ukuthi abantu kufanele baqhubekele phambili bangahlali ebusweni bezinto nezimo esihlangabezana nazo nsuku zonke, le ngenye yezincwadi zakho. Kuzokwenza ucabange, kuzokuphumuza kwesinye isikhathi, kuzokwenza ubone ukuthi impilo ingaba lula kunalokho kwesinye isikhathi esikucabangayo.
"Fahrenheit 451" de Ray Bradbury: Uma uthanda amanoveli esikhathi esizayo, uma uthanda ifilosofi, uma wenqaba ukuhamba nokuhamba kwabantu ngoba yikho lokho okwenziwa yiwo wonke umuntu, futhi uma ucabanga ukuthi ubungeke uphile ngaphandle kokufunda, uzothanda i- "Fahrenheit 451". Le ncwadi, engasetshenziswa ezimweni eziningi esiphila kuzo njengamanje emhlabeni, ngeke ikushiye ungenandaba. Ungayithanda kakhulu noma ngaphansi kepha uma uyiqeda ngeke uyithathe njengesichitha isikhathi.
"INkosana encane" de Antoine de Saint-Exupery: Incwadi yezithombe eyenzelwe abantu abadala. Izokukwenza ucabange, kuzokwazisa izinto ezibaluleke ngempela empilweni futhi ulahle okungenamsebenzi nokungadingekile kukho, kuzokwenza ubheke ngaphesheya kobuso futhi uhlole okuyiqiniso, okubalulekile. Inoveli emfushane yokufunda cishe okuyisibopho, ngingaqagela ukukusho. Incwadi ehunyushelwe ezilimini ezingaphezu kuka-250 futhi isibe yinoveli yaseFrance ethengiswa kakhulu kunazo zonke. Futhi uzobona ini: i-boa edle indlovu noma isigqoko? Uzoqonda ...
"Indela Elithengise I-Ferrari Yakhe" de URobin S. Sharma: Indaba eyela ngasocansini futhi ethinta imizwa ekuxhumanisa kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Kuyinganekwane encane equkethe imithamo emincane yokuzivocavoca okusebenzayo ukwenza impilo yakho ibe lula futhi ijabule. Akuyona incwadi yokuzisiza, ngoba ibhalwe njengenoveli kepha inokuxhumana okuthile nomfundi njengoba kuzobenza bacabange, bazindle, bazindle ngokuhle nokubi empilweni yabo, ngalokho abakufunayo ngempela ukufeza ngayo. isikhathi, izinhloso zakho, amaphupho akho, izinhloso zakho, izisusa zakho, njll. Kunconywe kakhulu kulabo bantu abangavumelani nabafisa yonke into empilweni.
"Tokyo Blues" de UHaruki Murakami: Lo mbhali waseJapan ubengeke alahleke ohlwini. Ziningi izincwadi zalo mbhali ezifanele ukuba phakathi kwalezi eziyishumi, kepha i- "Tokio Blues" iyadingeka. Uma ungakaze ufunde lutho ngalo mbhali, uthatha isikhathi futhi uma usuvele ukwenzile kodwa bekungeyona le ncwadi esiyincomayo, uthatha isikhathi. Uphatha ukulangazelela, ubulili, ukufa ngesibiliboco uMurakami kuphela angadlulisa ngezindaba zakhe. Kunconyelwe kakhulu abantu abasha njengoba iphatha izigaba zokuvuthwa ngomqondo wokuhlekisa nobumnene ngasikhathi sinye nasebantwini abadala be-nostalgic esikhathini esedlule.
"V weVendetta" de UDavid Lloyd no-Alan Moore: Ingenye yobuciko obukhulu kunabo bonke embonini yamahlaya. Uma uthanda ipolitiki, uma ungathandi ukuthi untshontshelwe inkululeko yakho, uma uphikisana nengcindezelo nobushiqela bomhlaba wobushiqela, uzowuthanda lo comic. Kungashiwo ukuthi ingeyamanje kakhulu nokuthi kulezi zikhathi kuhle kakhulu ukuyifunda.
"Incwadi evela kumuntu ongamazi" de UStefan Zweig: Kuyinoveli engaphelelwa yisikhathi futhi enhle kakhulu. Ngesitayela sokubhala esibucayi kakhulu futhi esiyimfihlakalo kusukela ekuqaleni. Yincwadi eyiswe ebhayisikobho naku-opera. Okwalabo abakholelwa othandweni lwempilo naphezu kobunzima.
"Yazi ukulahlekelwa" de UDavid trueba: Incwadi efundisa enye yezinto ezinzima kakhulu: ukuphila. Ukuphila yize uzalwe unenkanyezi hhayi ngenkanyezi, ukuze uphile yize ungenayo inhlanhla futhi uhlale unakho konke okuphikisana nakho,… Ukuwa amahlandla ayi-100 bese uvuka ama-101. Indaba yabaphumeleli abanganqobeki, kepha abalwa.
Incwajana engenalutho: Akusona isihloko sencwadi. Ngempela iyincwadi yokubhala engenalutho. Ngingakhetha incwajana yokubhalela noma incwadi enamakhasi angenalutho ukuze ngiqhubeke nokwakha amanoveli, izinkondlo, izindaba, imibhalo ngokubanzi ... wabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Uma ungaba nezincwadi eziyi-10 kuphela?
U-Trueba noMurakami, yebo. UBolaño noFaulkner, cha.
1-Udokotela - uNowa Gordon; Kuyisikhathi sokuphila konke, indaba yokuthuthuka komuntu! Sengiyifundile amahlandla ama-4, kubalulekile! Uzizwa uxhunyaniswe ne-protagonist yayo, uyamthanda, uyamthanda, uyamkhuthaza ngenhliziyo yakho, uhlupheka naye futhi ujabule naye. Futhi kukugcwalisa ngokumncoma.
2-Captain Alatriste -Arturo Pérez Reverte: Kungaba yini ngaphandle kukaputeni wethu. isifebe, umlwi kanye nomshayeli wezwe ongcono kakhulu
3- Iminyaka Eyikhulu Yokuba Sedwa-UGabriel García Márquez: i-adventure enhle yomndeni waseBuendía-Iguarán, nezimangaliso zayo, amaphupho, ukuthanda izinto, izinhlekelele, izihlobo, ukuphinga, ukuvukela, ukutholwa nokukholelwa, okumelwe ngasikhathi sinye inganekwane nomlando , usizi nothando lomhlaba wonke.
4- ICatón-Matilde Asensi yokugcina: Yincwadi ekuyisa ohambweni oluhle futhi ikukhombisa izindawo ezinhle nabantu, ingibamba kakhulu emlandweni ongeke ukwazi ukuyeka ukufunda uze ufunde igama elithi END
5- Izincwadi ezibhalelwe osemusha waseSpain-uJosé María Aznar: Izingxoxo ezivela komunye wosopolitiki abaphambili emhlabeni
I-6- The Holy Innocents- Miguel Delibes: Umfanekiso wezimo zokuphila eziyingozi zomndeni wabalimi abampofu abavela e-Extremadura, ochotshozwe usizi nejoka elibekwe abanumzane
7- Imigqa egwegwile kankulunkulu- iTorcuato Luca de Tena: U-Alice Gould ungeniswa esibhedlela sabantu abaphazamisekile engqondweni. Ekuphambaneni kwakhe, ucabanga ukuthi ungumphenyi wangasese. Ukuhlakanipha okwedlulele kwalona wesifazane nesimo sakhe sengqondo esibonakale sijwayelekile kuzodida odokotela kuze kube seqophelweni lokungazi ukuthi wamukelwa ngokungafanele yini noma empeleni uhlushwa ukuphazamiseka kwengqondo okunzima futhi okuyingozi.
I-8- Lazarillo de Tormes- Engaziwa: I-urchin enkulu uLázaro, ukufakwa esikoleni manje
9- Abantu besenzo-uJaime Gil de Biedma: amaKhomanisi kanye nenkungu! Izinkondlo eziphelele zezinye zezimbongi ezifundwa kakhulu zaseSpain:
10- U-Antonio Machado- Campos de Castilla: Yonke into ihamba kakhulu, imilingo kakhulu futhi yenza imvelo ithande ngokujulile… Iyamangalisa.